Puntland: Baarlamanka oo hindisaya xeer uu xukuumadda kaga madax-bannaynayo xisaabiyaha guud – Kalfadhi
Puntland: Baarlamanka oo hindisaya xeer uu xukuumadda kaga madax-bannaynayo xisaabiyaha guud
Baarlamanka Puntland oo beryahan dood xasaasi ah ka lahaa dib-u-eegista xisaab-celinta miisaaniyaddii 2018 ee ay xukuumaddu soo gudbisay ayaa go’aamiyay talaabooyin xal loogu helayo khaladaadka xisaab-xirka ku soo baxay.
Golaha oo maanta diiday ansixinta xisaab-celinta miisaaniyaddaas ayaa go’aamiyay; In golaha wakiilladu soo saaro xeer xisaabiyaha guud lagaga madax bannaynayo wasaaradda Maaliyadda.
Arrintan ayaa timi markii maanta Xafiiska Hanti-dhawrka guud ee Puntland uu golaha u sheegay in aan haba yaraatee lagu dhaqmin miisaaniyadda 2018ka ayna jiraan khaladaad badan oo ka muuqda sida loo kharash gareeyey dakhligii soo xerooday.
Dhaliilaha musuq-maasuqa la xiriira ee loo jeediyo xukuumadda ayaa u badan lunsasho dhaqaale iyo isla xisaabtan la’aan. Xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda ayaana ku milan xukuumadda taas oo sii kordhisa walaaca jira.
Sharciyan Xafiiska xisaabiyaha guud kama mid ah hay’adaha dowladda ee dastuurku dhigayo ee ka madax-bannaanaa xukuumadda.
Docda kale, goluhu wuxuu maanta xeeriyay in in dib-u-habayn lagu sameeyo xafiiska hanti-dhawrka guud iyo Bangiga dhexe ee dawladda, dib u eegisna uu goluhu ku samaynayo xeerarka ay ku shaqeeyaan.
Guddiga Dhaqaalaha iyo Xisaabaadka oo golaha warbixin siinaya Sabti 6-July, 2019/Garowe
Guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka ee golaha wakiillada Puntland ayaa bartamihii Juun wuxuu golaha u sheegay in dhaqaalaha dowladdu uu si weyn hoos ugu dhacay lixdii bilood ee ugu dambeeyay.
Golaha wakiillada Puntland oo diiday inuu ansixinyo xisaab-xirka miisaaniyaddii 2018 iyo Xafiiska Xeer ilaalinta oo la wareegaya